बधाई ! ‘अमेरिकन आइडल’मा छानिए नेपालका दिवेस (भिडियो सहित) – सडक मिडिया
बधाई ! ‘अमेरिकन आइडल’मा छानिए नेपालका दिवेस (भिडियो सहित)
सडक मिडिया February 17, 2020 0
नेपालकै विभिन्न रियालिटी शोहरुमा सहभागिता जनाएर चर्चामा आएका धेरैको नाम सबैलाई थाहा छ । नेपाल भन्दा बहिरा भारतका विभिन्न रियालिटी शोमा पनि नेपालीहरुको सहभागिता रहने गरेको छ । तर यतिबेला ‘अमेरिकन आइडल’मा छनोट भएका नेपालका २० वर्षिय दिवेस पोखरेल निकै चर्चामा रहेका छन् ।
‘एवीसी’बाट प्रशारण हुने चर्चित रियालिटी शोको पहिलो एपिसोडबाट नै दिवेस छनोट भएका हुन् । अडिसनको भिडियो बाहिरिएसंगै उनको चर्चा देश बिदेशमा भैरहेको छ । नेपाली भएकै कारण मात्र चर्चामा नभएर दिवेश भित्रको प्रतिभाले उनलाई चर्चामा ल्याएको हो । आर्थर गनको नामबाट पनि चिनिने उनले बब दिलनको ‘गर्ल फ्रम द नर्थ कन्ट्री’गीत प्रस्तुत गरेका थिए जुन जजहरुले निकै रुचाएका थिए । जजहरुले भनेपछि उनले अर्को गीत ‘सम टोल्ड मि लङ अगो’ पनि सुनाएका थिए ।
६ वर्ष अघि अमेरिका पुगेका दिवेसको स्थिटोरीमा नेपालको चर्एचा गरिनुका साथै नेपालका केहि दृश्यहरु समेत देखईएको थियो । जसले नेपालकाे बारेमा उक्त शाे मार्फत अझै चर्चा गरिएकाे थियाे ।
Posted in भिडियो, विशेष समाचार
Previous Post: हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गरेर फर्कियो कालापानी गएको टोली
Next Post: काङ्ग्रेस अछामको कृयाशील सदस्यता मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर १ र २मा बितरण
यसरी हेर्नुस अमेरिकी डिभी चिठ्ठाको रिजल्ट – तरिका सहित
मनीषा कोइरालाको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आयो 2,507 views
कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु 2,352 views
रुकुम घ’टनाबारे बोलिन अभिनेत्री रेखा थापा 2,172 views